တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား တွေ့ဆုံ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသား၂ ဦး အား သက်ညှာပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သတ္တမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး 7th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting တက်ရောက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့သို့ …
ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ အပြစ်တွေအပြန်အလှန်တင်ရန်ဖြစ်၊အအ်ိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရပါတယ်၊ အချို့ဆို ဘ၀ပျက်၊အနာဂတ်မဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ကြရပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့အဲဒီလို မဖြစ်ကြစေလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ ဖောက်ပြန်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ရောရုပ်ပါ ထိခို်က်မှု နည်းပါးစွာနဲ့ အလှမပျက်၊ ဘ၀မပျက်ဘဲနဲ့ ရှင်သန်နို်င်ဖို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက အိမ်ထောင်သက်တမ်းရလာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသားတွေထက် အရွယ်ကျတာ မြန်ပါတယ်။ သားသမီးတွေ …
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ သစ်ခိုးသယ်တဲ့ ကားကို ရဲတွေက သတိမထားမိဘူးတဲ့ဗျို့
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ သစ်ခိုးသယ်တဲ့ ကားကို ရဲတွေက သတိမထားမိဘူးတဲ့ဗျို့ ကြည့်လဲလုပ်ကြပါဦး နိုင်ငံကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသူကြီးတို့ရယ်။ ခုဟာက ပေါ်တင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာနေပြီ …ပြည်သူက ခင်ဗျားတို့တာဝန် ယူရတော့မှာလား … ကဲ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ …ဒါတောင် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာ ဖြစ်နေတာနော် …တာဝန်ရှိသူတွေ နေနိုင်လွန်းကြတယ် …. ရဲတွေကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ ပြန်သင်ပေးမယ်…. သေချာလိုက်မှတ်ကြ …. ပွဲကြမ်းကုန်ကြပြီ …
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးထံသို့ တို့မျိုးဆက်ကွန်ယက်(WE Generation Network)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများကွန်ယက်(AMTUN)တို့၏ပူးတွဲ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးခင်ဗျား … ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ကျခံနေရသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများဖြစ်သော ကိုဝင်းဇော်ထွန်း နှင့် ကိုဇော်လင်းတို့၏ နောက်ဆုံးအယူခံကို (၂၉-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချရာ အယူခံရှုံးနိမ့် ပြီး သေဒဏ်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းဖွယ် သိရှိရပါသည်။ ယင်းအမှု၏ စစ်ဆေးစဉ်တလျှောက်လုံးမှာလည်း သေချာခိုင်မာမှု မရှိသော …
မြမြအဖြစ်သင်ဇာ သရုပ်ဆောင်မှာကြောင့် မုဒိန်းသမားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်လိုသူ များပြားလာ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက လူမှုကွန်ရက်မှာ ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် ပျံ့နှံခဲ့တဲ့ အဓ္ဓမပြုခံရတဲ့ မြမြ အကြောင်းကို လူတွေစိတ်ဝင်တစ်စားပြောလာတဲ့နောက်မှာ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်က အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုဆိုရင် မြမြအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသမီးကိုလည်း ထုတ်ဖော်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမြနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် အနုပညာရှင်ကတော့ စမတ်ကျကျနဲ့ နေထိုင်တတ်ပြီး Sexy ကျကျဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ မမသင်ဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ …
ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ် သားလေး
ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ် သားလေး သူ့နာမည်ကတော့ လီယိုနာဒို နီကနို ပါ။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ San Juan မြို့ကြီးအနီး Las Piedritas မြို့ငယ်လေးက ၁၂ နှစ် အရွယ် အလယ်တန်း ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အသက်ဟာ ငယ်ရွယ်ပေမယ့် သူဟာ ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ …
ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ အစ္စဏီအား “ကံ မကုန်လို့ ပြန်ဆုံခဲ့ရင် ဖက်နမ်း ခွင့်ပြုပါ”လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စူးရှထက် အဆိုတော်အစ္စဏီကို ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ မော်ဒယ်စူးရှထက်က ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၄၂၊ ၃၂၃ တို့နဲ့ တာမွေ မြို့နယ်တရားရုံးမှာ မနှစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလက တည်းက စွဲဆိုထားခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် …
သိန်း၁၅၀၀​ပေးရတဲ့ကွန်​ဒို ဝန်​​ဆောင်​မှုညံ့ဖျင်းလို့ ထုတ်​​ဖော်​မိတဲ့ သူကို​ ညသန်း​ခေါင်​လက်​နက်​အစုံနဲ့ ဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်​ ​မောင်​​မောင်​​အေးပြော
သိန်း၁၅၀၀​ပေးရတဲ့ကွန်​ဒို ဝန်​​ဆောင်​မှုညံ့ဖျင်းလို့ ထုတ်​​ဖော်​မိတဲ့ သူကို​ ညသန်း​ခေါင်​လက်​နက်​အစုံနဲ့ ဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အတွက်​ ​မောင်​​မောင်​​အေးဒဲ့​ပြောပြီ… စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ့်ဟင်းပွဲထဲ အမှိုက်စ / အမွှေးအမျှင် / ပိုးမွှား အကောင်ဘလောင်လေးတွေ ပါလာလို့ရှိရင်တောင် FB တင်ပြီး ကွန်ပလိန်းတက်လိုက်တာနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကအစ ကျေနပ်အောင်သေချာတောင်းပန်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေကြရတဲ့ခေတ်မှာမှ….. ကိုယ့်ချွေးနည်းစာနဲ့ ရှာထားတဲ့ငွေနဲ့ သိန်းထောင်ကျော်တန် ကွန်ဒို လို့နာမည်တပ်ထားတဲ့တိုက်ခန်း မှာ …